Le Nqubomgomo Yama-cookie ilawula ukusetshenziswa kwamakhukhi, ama-plugins wezindaba zenhlalo nobunye ubuchwepheshe obufanayo yiChurch of Scientology njengengxenye yokuhambela kwakho kuwebhusayithi yethu www.scientologycourses.org (lapha: “Iwebhusayithi”). Ukuthola eminye imininingwane mayelana nokuthi ama-cookie nama-plug wokuxhumana nabantu ayini, bheka i-Article 2.
Ngokuqhubeka nokusebenzisa iWebhusayithi yethu ngemuva kokuthi waziswe ngokusetshenziswa kwamakhukhi nama-plugins ezinkundla zokuxhumana, uyavuma ukuthi ulufundile lonke ulwazi olusetshenzisiwe nokuthi uyavuma ngokungenaphutha lolu hlelo njengoba kubekiwe kule Nqubomgomo Yekhukhi engezansi.
Uma ufuna imininingwane engaphezulu (ejwayelekile) yokuthi siyicubungula kanjani imininingwane yakho ngaphandle kwama-cookies namaphephabhuku ezokuxhumana nabantu, kufaka phakathi ukuxhumana kwakho nathi nge-imeyili, ucingo, ifeksi kanye nabezindaba zenhlalo noma maqondana ne-oda lakho noma Thenga, uthunyelwa ngomusa kwinqubomgomo yethu yobumfihlo.
Idatha yakho siqu icutshungulwa ngesisekelo somthetho osetshenziswayo wokuvikela idatha yi-Church of Scientology International, 6331 Hollywood Boulevard, Los Angeles, CA 90028, United States of America (ngemuva kwalokhu: "CSI", "thina", "thina", " zethu ”). Ungaxhumana nathi nge-imeyili ku-dpo@scientology.net.
Lapho kukhulunywa ngakho kule Nqubomgomo ye-Cookie kwimithetho noma izimiso, izichibiyelo ezingenzeka kule mithetho noma izimiso zifakiwe ngokuphelele.
Sinelungelo lokushintsha futhi sihambise le nqubomgomo yekhukhi ngokwethu. Uma kunjalo, lezo zinguquko kanye nokuzivumelanisa nezimo kuzodluliselwa kuwe ngeWebhusayithi yethu okungenani amasonto amabili ngaphambi kokuba lezo zinguquko kanye nezimo ziqale ukusebenza. Ukunye ukusetshenziswa kweWebhusayithi yethu kuzoba ngaphansi kwenqubomgomo yekhukhi elilungisiwe.
YINI IMIPHAKATHI NEMIPHAKATHI YOKUXHUMANA UMPHAKATHI?
Amakhukhi ngamafayela wombhalo amancane agcinwe ku-hard drive yedivayisi yakho aqukethe imininingwane ethile noma idatha yomuntu siqu.
Ama-plug media ezenhlalo ayizingcezu ezincane zesoftware ezenzelwe futhi ezinikezwe abahlinzeki bensizakalo yezokuxhumana (njenge-Facebook), ezisivumela ukuthi sihlanganise imithombo yezokuxhumana nabantu kwiWebhusayithi yethu.
Ubuchwepheshe obufanayo izingcezu ezincane zesoftware noma izithombe ezingabonakali (njenge-Facebook Pixel) ezakhiwe futhi zinikezwe abahlinzeki ngemisebenzi abaningana, okuvumela thina, ngokwesibonelo, ukulandelela ukuguqulwa noma ukuqondisa kangcono imikhankaso yethu yokuphromotha.
IMIPHI IMIKHAKHA, IMITHETHO YOKUXHUMANISA UMPHAKATHI KANYE NESIKHOLOZO SOKUSEBENZISA?
Lapho uvakashela iwebhusayithi yethu, kusetshenziswa inqwaba yamakhukhi kudivayisi yakho kanye nama-plugins ezindaba zenhlalo ayasetshenziswa. Lokhu ngokuvamile kusivumela ukuthi sikukhombe. Sisebenzisa le datha ukuthola ukuqonda kokuthi wena nabanye bayisebenzisa kanjani iWebhusayithi yethu ngokuqoqa imininingwane yezibalo nokusetshenziswa, kusisize ukuba sithuthukise Iwebhusayithi yethu, izinto zokwakha kanye nezinsizakalo ukuze sikunikeze umuzwa ongcono womsebenzisi. Uma ungakuthandi ukusebenzisa kwethu amakhukhi, bheka i-Article 7.
Singasebenzisa uhlobo olulandelayo lwamakhukhi:
Amakhukhi adingeka kakhulu ekusebenzeni kweWebhusayithi yethu;
Amakhukhi okusebenza asetshenziselwa ukukubona lapho ubuyela kwiwebhusayithi yethu;
Amakhukhi akhulisa ukusebenza asetshenziselwa ukubona nokubala inani labavakashi kwiWebhusayithi yethu nokuhlaziya ukuthi izivakashi zihamba kanjani kwiWebhusayithi yethu;
Amakhukhi wokuphromotha asetshenziselwa ukuqopha ukuvakasha kwakho kwiwebhusayithi yethu, amakhasi owavakashele kanye nezixhumanisi ozilandelile.
Iwebhusayithi yethu isebenzisa iGoogle Analytics. Le nsizakalo yokuhlaziya iwebhu, enikezwe iGoogle Inc., isebenzisa amakhukhi wokuhlaziya. Le nsizakalo isisiza ukuthi siqoqe futhi sihlaziye imininingwane yabavakashi (njengokusetshenziswa kwesiphequluli, izinombolo zabavakashi abasha, impendulo yomsebenzi wokumaketha nezikhathi zokuphequlula) ukuthuthukisa Iwebhusayithi yethu nesipiliyoni sakho, nokwenza imikhankaso yethu yezentengiso ifanele.
Imininingwane eqoqwe ngamakhukhi weGoogle Analytics mayelana nokusebenzisa iwebhusayithi yethu ithunyelwa ku-Google futhi igcinwe kuyo kanye nekheli lakho le-IP. I-Google, isibonelo, ingasebenzisa lolu lwazi ngezinhloso ezilandelayo:
Nikeza imibiko yomsebenzi wentengiso kubakhangisi nakumawebhusayithi aphatha imininingwane yokuphromotha futhi uqinisekise ukuthi labo bashicileli bewebhusayithi bayakhokhelwa;
Thola futhi ulwe nokukhwabanisa nobunye ubungozi bokuphepha ukuvikela abasebenzisi nabalingani;
Feza izibopho zayo zomthetho;
Thuthukisa izinto zayo;
Siza abanikazi beWebhusayithi nabanhlelo lokusebenza abasebenzisa iGoogle Analytics ukuqonda ukuthi izivakashi zixhumana kanjani namasayithi noma izinhlelo zazo zokusebenza.
Kuyo yonke le misebenzi ngaphandle kwephuzu lokugcina lezinhlamvu, i-Google isebenza njengesilawuli sedatha kanye nokusebenza kwemininingwane eyiqoqayo ngokusetshenziswa kwewebhusayithi kwenzeka ngaphansi komthwalo wayo. Funda kabanzi mayelana nokuSetshenziswa kukhukhi kwe-Google Analytics kumaWebhusayithi.
Kodwa-ke, ungalawula ukuthi yiluphi ulwazi oluthunyelwa kuGoogle ngalezi zindlela ezilandelayo:
Uma ungafuni ukuthi iGoogle Analytics isetshenziswe esipheqululini sakho, ungafaka isengezo sokuphuma kwesiphequluli se-Google Analytics. Funda kabanzi mayelana neGoogle Analytics kanye nobumfihlo.
Uma ungene ku-Akhawunti yakho ye-Google, unga – ngokuya ngezilungiselelo ze-akhawunti yakho – ubuke futhi uhlele idatha ethile iqoqwa yiGoogle kumasayithi nezinhlelo zokusebenza ozivakashelayo.
Imodi ye-incognito ku-Chrome ikuvumela ukuthi udlulise amehlo kwi-Intanethi ngaphandle kokuthi amakhasi e-web kanye namafayela aqoshwe kumlando wesiphequluli sakho. Amakhukhi ayasuswa ngemuva kokuthi uvale wonke amawindi we-incognito namathebhu. Amabhukhimakhi wakho nezilungiselelo zigcinwa uze uzicime.
Izilungiselelo zokukhangisa zikuvumela ukuthi uphathe ukuthi yiziphi izikhangiso ze-Google ozibonayo kwi-Intanethi. Ungathola ukuthi zikhethelwa kanjani izikhangiso, ungazikhiphezi ohlwini lwezifiso ezenziwe izikhangiso, futhi uvimbele abakhangisi abathile. Funda kabanzi ngemikhangiso.
Iwebhusayithi yethu ingasebenzisa i-Facebook Pixel. Lesi isithombe esingabonakali esifakiwe kumakhasi eWebhusayithi yethu futhi agcinwe kumaseva we-Facebook. Njalo lapho uvula ikhasi lewebhusayithi yethu lapho le pixel iqoshwe khona, le pixel ilandelwa kudivayisi yakho kuleso seva se-Facebook. Idatha elandelayo inikezwe ku-Facebook: ikheli lakho le-IP kanye nezici ezithile zedivayisi yakho (isib. Uhlobo, uhlelo lokusebenza, isoftware ethile ne-Hardware).
Ngenkathi singeke sikuxhumanise nalolu lwazi uqobo, i-Facebook ingenza kanjalo uma unephrofayili ku-Facebook. Kuze kube manje, i-Facebook isebenza njengomlawuli wedatha. Ngakho-ke siyakumema ukuthi ubheke inqubomgomo yobumfihlo ye-Facebook ukuze ufunde ngezinhloso (kufaka nezinhloso zokukhangisa) lapho imininingwane eqoqwe yi-Facebook isetshenziswa khona.
Sithola kuphela imininingwane yezibalo kusuka ku-Facebook uqobo hhayi idatha yakho.
Uma ungafisi ukuthola imininingwane ethile yokuphromotha, ungaguqula okuthandayo kokukhangisa ekhasini lakho le-Facebook elenzelwe umuntu. Ekugcineni, ngamasethingi edivayisi yakho yeselula, ungakhombisa nokuthi idatha yomshini ingeke idluliselwe kubantu besithathu. Funda kabanzi nge-Facebook Pixel.
Etafuleni elingezansi, sikunikeza ngesibukezo samakhukhi nama-plug wokuxhumana nabantu esiwasebenzisa kuWebhusayithi yethu.
ISICELO / INJONGO
Ikhukhi (ukusebenza ngcono)
Amakhukhi abekwe yiCrazy Egg Inc., isiteji esikhiqiza ama-heatmaps asivumelayo ukuthi sihlaziye ukuthi abasebenzisi basebenzisana kanjani nale Webhusayithi.
Bheka inqubomgomo yobumfihlo ye-Crazy Egg
Ikhukhi ukufaka imininingwane mayelana nokuthi isivakashi sichofoza kuphi kwiWebhusayithi yethu ukukhiqiza umbiko ohlanganisiwe wokushisa kulelo khasi.
Ikhukhi ukugcina uhlu lwemicimbi yegundane engaqinisekiswa ukuthi ingeniswe kumaseva ethu ngaphambi kokuthi ikhasi lamanje lilayishwe. Le micimbi ingahle icutshungulwe futhi ifakwe ekhasini elilandelayo.
Ikhukhi lesikhathi lihlelwe ekubukeni kwekhasi lokuqala kwanoma yikuphi ukuvakasha ukuze izingxenye ezithile zekhodi zishiswe kuphela ekubukeni kwekhasi lokuqala, okwenza ikhasi lisheshe futhi lisebenze kangcono.
Amakhukhi anikezwe yi-Google Analytics ukusisiza ukukala ukuthi abasebenzisi basebenzisana kanjani nokuqukethwe Iwebhusayithi yethu (bona i-Article 3.3).
Funda kabanzi mayelana nokuSetshenziswa kukhukhi kwe-Google Analytics kumaWebhusayithi.
Iminyaka engu-2 kusuka kusethi / ukubuyekeza
Ukuphela kweseshini sesiphequluli
Izinyanga eziyi-6 kusuka kusethi / ukubuyekeza
Ikhukhi ukubamba inombolo engahleliwe eyenziwa okokuqala umuntu evakashela Iwebhusayithi yethu. Inhloso yawo wukuhlonza kangcono izivakashi ezintsha nezihlukile kwiWebhusayithi yethu.
Ikhukhi ukugcinela isithombisi sangaphandle sakho ukuze ekuvakasheleni okuzayo umrejista ofanayo azonamathiselwa esimisweni sakho.
Ubuchwepheshe obunikezwe yi-Facebook ukukala ukusebenza kokukhangisa kwethu ngokuqonda ngezenzo abasebenzisi abazithathayo kwiWebhusayithi yethu (bheka iSigaba 3.4).
Funda kabanzi nge-Facebook Pixel.
SIKHUMBULA YINI UMBUZO WAKHO WABO?
Sithembela kwabangaphandle, ngokwesibonelo:
Ukukunikeza Iwebhusayithi yethu (efana nomhlinzeki wokusingathwa); noma
Ukuqondisa imininingwane yethu yokuphromotha (efana nenkampani yokumaketha); noma
Ukuze ucubungule i-oda lakho (njengenkampani yezokuthutha ukuletha impahla); noma
Ukucubungula inkokhelo yakho (njengomhlinzeki wesevisi yokukhokha noma i-ejensi yokuhlola isikweletu).
La maqembu esithathu avunyelwe kuphela ukucubungula imininingwane yakho asenzele yona nemiyalo yethu ebhaliwe ebhaliwe. Siphinde futhi sigunyaze ukuthi bonke labo bantu besithathu bakhethwa ngokunakekelwa okufanele futhi bazibophezele ekubhekeni ukuphepha kanye nobuqotho bemininingwane yakho.
Singabelana ngemininingwane yakho yangasese nezinye izinhlangano zikazwelonke, zesifunda noma zasendaweni zeChurch of Scientology, njengamasonto wasendaweni, oNgqongqoshe kanye nokwenza ngcono kwezenhlalo nezinhlelo zokusiza abantu. Isibonelo, singabelana ngemininingwane yakho yokuxhumana neBandla elisendaweni yangakini uma uzwakalise intshisekelo yokujoyina inhlangano yeNhlangano Yezesayensi ukuze bakwazi ukuxhumana nawe. Kodwa-ke, sizoqinisekisa ukuthi zonke izinhlangano zeSayensi zizobhekisisa ukuthi konke ukucubungulwa kwemininingwane yakho kuhambisana nalokho okushiwo kule Nqubomgomo Yama-cookie.
Singabelana ngemininingwane yakho yangasese ngezinhloso ezishiwo ku-Article 3 ne-International Association of Scientologists Administrations (IASA) kanye ne-World Institute of Scientology Enterprise (WISE). Uma udinga imininingwane engaphezulu mayelana nenqubo yomuntu siqu ye-IASA nenqubo yeWISE, ucelwa ngomusa ukuthi uthintane nezinqubomgomo zazo zobumfihlo.
Singaphoqeleka ngokomthetho ukuthi sabelane ngemininingwane yakho nabanolwazi abasebenza ngokuqinisa umthetho noma abamele, abezomthetho, izinhlaka zikahulumeni noma izinhlangano, kubandakanya nabaphethe ukuvikela idatha, ukuthobela isibopho esingokomthetho njengoba kubekiwe ku-Article 3 ngenhla.
Asithumeli idatha yakho yomuntu siqu ngendlela ekhonjwa komunye umuntu wesithathu kunaleyo eshiwo ku-Article 4.1, 4.2, 4.3 no-4.4 ngaphandle kwemvume yakho ecacile yokwenza kanjalo. Kodwa-ke, singathumela imininingwane engaziwa kwezinye izinhlangano ezingasebenzisa leyo datha ukwenza ngcono izinto nezinsizakalo futhi zivumelanise ukumaketha, ukubonisa nokuthengisa lezo zinto nezinsizakalo.
SIQHUBEKA KANJANI IDATSI LAKHO LOMuntu?
Sicubungula imininingwane yakho ngaphakathi nangaphandle kwe-European Economic Area (EEA), kufaka phakathi nase-USA. Ukuze ucubungule imininingwane yakho eyenzelwe izinhloso ezichazwe ku-Article 3 ngenhla, futhi singadlulisa imininingwane yakho kubantu besithathu abacubungula thina ngaphandle kwe-EEA. Ibhizinisi ngalinye elingaphandle kwe-EEA elisebenza ngemininingwane yakho lizoboshwa ngokuphepha okuvikelekile maqondana nokucubungulwa kwemininingwane yakho yangasese. Kwa-CSI, ukuvikela okunje kuvela kokuthi siboshwe ngokuqondile ngokuhambisana nomthetho we-EU kumongo wokuvikelwa kwemininingwane yomuntu siqu. Okwesithathu, ukuphepha okunjalo kungaba ngumphumela we:
Izwe elamukelayo linemithetho endaweni engabhekwa njengelingana nokuvikelwa okunikezwe ngaphakathi kwe-EEA; noma
Ilungiselelo lesivumelwano phakathi kwethu nalelo bhizinisi; noma
Indlela evunyelwe yokugunyazwa, efana nesinqumo se-EU-US Shield Sinqumo esamukelwe yiKhomishini yaseYurophu ngomhlaka 12 kuJulayi 2016.
Singadlulisa imininingwane engaziwa kanye/noma edidiyelwe ezinhlanganweni ezingaphandle kwe-EEA. Uma kwenzeka lokho kudluliselwa kwenzeka, sizoqinisekisa ukuthi kukhona izindawo zokuphepha ezikhona ukuze kuqinisekiswe ukuphepha nobuqotho bemininingwane yakho nawo wonke amalungelo maqondana nedatha yakho yangasese ongayijabulela ngaphansi komthetho osetshenziswayo.
YIMIPHI IMIPHAKATHI YOKUGCINA ESIPHILA NAYO?
Senza konke okusemandleni ethu ukucubungula kuphela leyo mininingwane yomuntu siqu edingekayo ukufeza izinhloso ezibhalwe ngaphansi kweSigaba 3 ngenhla.
Idatha yakho siqu icutshungulwa kuphela isikhathi esidingekayo ukuze kufezekiswe izinhloso ezibhalwe ngaphansi kwe-Article 3 ngenhla noma kuze kube yileso sikhathi lapho uhoxisa imvume yakho yokuyicubungula. Ukuhoxa kwemvume yakho kungasho ukuthi ngeke usakwazi ukusebenzisa konke noma ingxenye yeWebhusayithi yethu. Sizokhipha idatha yakho uqobo uma ingasadingeki ngezinhloso ezichazwe ku-Article 3 ngenhla, ngaphandle kokuthi:
Intshisakalo enkulu ye-CSI, noma omunye umuntu wesithathu, ekugcineni idatha yethu yomuntu siqu iyabonakala; noma
Isibopho somthetho noma sokulawula noma i-oda lokwahlulela noma lokuphatha esivimbela ukuthi singazikhombi.
Uyaqonda ukuthi isici esibalulekile semizamo yethu yezentengiso siphathelene nokwenza izinto zethu zokuthengisa zihambisane nawe. Sikwenza lokhu ngokwenza ngokwezifiso iphrofayili yakho eyingqayizivele ngokususelwa ezimeni ezifanele bese sisebenzisa le phrofayela ukukunikeza ukuxhumana, ukukhuphula, ukuhambisa, amaphephandaba kanye nolunye ulwazi lokuphromotha mayelana nezinto zokwenziwa nezinsizakalo ezingakuthanda.
Sizothatha izinyathelo ezifanele zobuchwepheshe nezenhlangano ukugcina idatha yakho uqobo iphephile ekungeneni okungagunyaziwe noma ukweba kanye nokulimaza ngephutha noma kokubhujiswa. Ukutholwa ngabasebenzi bethu noma abasebenzi beqembu lesithathu kuzoba ngesidingo sokwazi kuphela futhi kubhekane nezibopho eziqinile zobumfihlo. Uyakuqonda, nokho, ukuthi ukuphepha nokuvikeleka kuyizibopho zemizamo emihle kakhulu ezingasoze zaqinisekiswa.
Uma ubhalisile ukuthola imininingwane yokuphromotha, njengokuxhumana, ukukhuphula, ukulethwa kanye nezincwadi zezindaba, nge-imeyili noma ezinye iziteshi zokuxhumana ngomuntu nomuntu, ungaguqula okuthandayo ngokuthola imininingwane enjalo yokuphromotha ngokuchofoza ukuphuma Isixhumanisi esinikezwe kulolo lwazi lwentengiso.
Uma ubhalisile ukuthola imininingwane yokuphromotha ephepheni, njengamagazini, ezokuxhumana, ukukhuphula, ukulethwa kanye nezincwadi zezindaba, ungenqaba ukuthola eminye imininingwane yokuphakamisa ephepheni ngokuthumela isicelo Esikhulu Sokuvikelwa Kwedatha ngokuya ngeSigaba 8.8 sale Nqubomgomo Yama-cookie.
YINI UMA UNGATHANDA AMAKHANDA?
Ukuze uvimbele amakhukhi ukuthi angabeki kudivayisi yakho, kufanele ulungiselele izilungiselelo zesiphequluli sakho. Ungawaguqula kanjani lezi zilungiselelo, ukususa amakhukhi futhi uhoxise imvume yakho ekusebenziseni kwethu amakhukhi kuya ngesiphequluli osisebenzisayo. Noma kunjalo, khumbula ukuthi ukuguqula lezi zilungiselelo noma ukususa amakhukhi kungahle kuholele ekutheni izici ezithile zale Webhusayithi zingasasebenzi kahle. Chofoza kwisiphequluli osisebenzisa ngezansi ukuthola imininingwane eminingi mayelana nokuthi ungazilungisa kanjani izilungiselelo zamakhukhi:
AYINI AMALUNGELO AKHO?
Unelungelo lokucela ukufinyelela kuyo yonke imininingwane yakho esetshenziswe nguwe ephathelene nawe. Sigodla ilungelo lokukhokhisa imali yokuphatha efanelekile yezicelo eziningi ezilandelwayo zokufinyelela ezihanjiswe ngokucacile zokudala inkathazo noma ukulimaza kithi. Isicelo ngasinye kumele sisho ukuthi yimuphi umsebenzi wokucubungula ofisa ukusebenzisa ilungelo lakho lokufinyelela futhi kufanele usho ukuthi yiziphi izigaba zemininingwane ofisa ukufinyelela kuzo.
Unelungelo lokulungiswa kabusha, e. ukubuza ukuthi noma imiphi imininingwane yomuntu ephathelene nawe engalungile, ilungiswa mahhala. Uma ufaka isicelo sokulungiswa, isicelo sakho sidinga ukuhambisana nobufakazi bemvelo enephutha yedatha ebuzwa ngayo.
Unelungelo lokuhoxisa imvume yakho oyinikeze ngaphambilini yokucubungula idatha yakho.
Unelungelo lokwenza iphutha, e. ukucela ukuthi idatha yomuntu siqu ephathelene nawe isuswe uma le datha ingasadingeki ngezinjongo noma uma ukhipha imvume yakho yokuyicubungula. Kodwa-ke, udinga ukukhumbula ukuthi isicelo sokususwa sizohlolwa yithina:
Izintshisekelo zethu nezesithathu ezingahle zibheke ngaphezulu kwezintshisekelo zakho; noma
Izibopho zomthetho noma zokulawula noma ama-oda wokuphatha noma okwahlulela angaphikisana nokususwa okunjalo.
Unelungelo lokukhawulwa esikhundleni sokususwa, e. ukucela ukuthi sikhawulele ukucubungulwa kwemininingwane yakho uma:
Siqinisekisa ukunemba kwemininingwane yakho; noma
Ukusebenza akukho emthethweni futhi uphikisana nokususwa kwemininingwane yakho; noma
Udinga idatha yakho yomuntu siqu ukusungula, ukusebenzisa noma ukuvikela isimangalo esisemthethweni, ngenkathi singasayidingi imininingwane yakho eyenzelwe izinhloso ezibhalwe ngaphansi kweSigaba 3 ngenhla; noma
Siyaqinisekisa ukuthi izintshisekelo zethu ezingokomthetho zibeka phansi izintshisekelo zakho uma usebenzisa ilungelo lakho lokuphikisa ngokuhambisana ne-Article 8.6.
Unelungelo lokuphikisa ukucutshungulwa kwedatha yomuntu siqu uma:
Ukucubungula kusekwe kuntshisekelo yethu esemthethweni; futhi
Uyakwazi ukufakazela ukuthi kunezizathu ezingathi sína nezizwakalayo ezixhumene nesimo sakho esithile ezivumela lokho kuphikisana; futhi
Izintshisekelo zethu ezisemthethweni azibheqi izintshisekelo zakho.
Kodwa-ke, uma ukucubungula okuhlosiwe kufanelekile njengemakethe eqondile, unelungelo lokuphikisa ukucubungula okunjalo mahhala futhi ngaphandle kokucaciswa.
Unelungelo lokutholakala kwedatha, e. ukwamukela kithi ngefomethi ehlelekile, esetshenziswa kakhulu futhi efundeka ngomshini yonke imininingwane yakho osinikezile uma ukucubungula kusekelwe kwimvume yakho noma isivumelwano nawe.
Uma ufisa ukuhambisa isicelo sokusebenzisa elilodwa noma amaningi amalungelo akleliswe ngenhla, ungaxhumana Nesikhulu Sokuvikelwa Kwemininingwane yethu ngokuthumela i-imeyili ku-dpo@scientology.net. I-imeyili ecela ukusebenzisa ilungelo ngeke ithathwe njengokuvuma nokuqhutshwa kwemininingwane yakho yangasese ngaphezu kwalokho okudingekayo ekuphatheni isicelo sakho. Isicelo esinjalo kufanele sihlangabezane nemibandela elandelayo:
Yisho ngokucacile ukuthi yiliphi ilungelo ofisa ukulisebenzisa; futhi
Yisho ngokucacile izizathu zokusebenzisa ilungelo lakho uma kudingeka lokho; futhi
Isicelo sakho kufanele sibhalwe phansi futhi sisayinwe; futhi
Isicelo sakho kufanele sihambisane nekhophi elicashuniwe ledijithali yomazisi wakho osemthethweni okubonisa umazisi wakho. Uma usebenzisa ifomu lokuxhumana, singakucela isiqinisekiso sakho esisayiniwe kanye nobufakazi bokuthi ungubani.
Sizokwazisa ngokushesha ukuthi usitholile isicelo sakho. Uma isicelo sihlangabezana nale mibandela engenhla futhi kufakazelwa ukuthi siyasebenza, sizoyihlonipha masinyane ngangokunokwenzeka nangezinsuku ezingamashumi amathathu (30) zakamuva ngemuva kokuthola isicelo sakho.
Uma unezikhalazo maqondana nokuxazululwa kwemininingwane yakho uqobo, ungaxhumana ngaso sonke isikhathi neSikhulu Sokuvikelwa Kwedatha yakho ngokuthumela i-imeyili ku-dpo@scientology.net. Uma uhlala ungenelisekile ngempendulo yethu, ukhululekile ukufaka isikhalazo kuziphathimandla ezivikela idatha.